Momba anay - Shenzhen Hero-Tech Refrigeration Equipment Co., Ltd - 乐动平台网址,乐动体育app官网入口
Ny sandan'ny anjara Hero-Tech Group Company Limited
Shenzhen Hero-Tech Refrigeration Equipment Co., Ltd, teo ambany fahefan'ny Hero-Tech Group, dia naorina tao Shenzhen, Faritanin'i Guangdong tamin'ny 2010. Hero-Tech Group Co., Ltd. ampahany amin'ny fiandohan'ny voalohany;Nanomboka ny taona 2005, manana ny ekipantsika manokana ny HERO-TECH hamolavola rafitra fampangatsiahana indostrialy.Ary miaraka amin'izay koa dia manana ny marika HELD-TECH.Midika hoe HERO-TECH amin'ny teny Deutsch.Ny marika dia manondro fa ny ekipanay dia tanora, mafana fo, mamorona ary mavitrika.Nahazo fitomboana haingana ny Hero-Tech teo amin'ny haavon'ny orinasa sy ny fanatsarana ny vokatra.21 taona niainana tamin'ny vata fampangatsiahana indostrialy no nahatonga ny satan'ny HERO-TECH teo aloha tany Shina.Manana tambajotra serivisy naorina tao Guangzhou, Shanghai, Beijing, Tianjin, Zhengzhou, Jinan, Qingdao ary Suzhou izahay mba hanomezana serivisy haingana sy mora kokoa.Nandritra izany fotoana izany, naorina sy nohatsaraina ny tambajotram-pivarotana any ivelany, izay mandrakotra firenena sy faritra 52, toa an'i Afovoany Atsinanana, Azia Atsimo-Atsinanana, Eoropa Atsinanana, Amerika Atsimo ary Aostralia.Mitondra fitomboana haingana amin'ny habetsahan'ny fanondranana isan-taona izany.
乐动体育赛事Hero-Tech dia natokana hikaroka sy hampivelatra纽约indostrian'ny fampangatsiahana indostrialy sy ny fanaraha-maso ny mari-pana, ny vokatra isan-karazany ao anatin'izany ny rivotra mangatsiaka sy ny rano mangatsiatsiaka Scroll Chiller, Screw Type Chiller, Glycol Chiller, Laser Chiller, Oil Chiller, Heating and Cooling Chiller, Mold Temperature Controller, Cooling Tower, sns.
Ny vokatra HERO-TECH dia natao hanampy amin'ny fampihenana ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana miaraka amin'ny vata fampangatsiahana ambany kokoa ny Global Warming Potential (GWP) ary ny asa mahomby.
Ny Focus dia mahatonga ny Hero-Tech ho matihanina.Taorian'ny taona maro ny fampandrosoana, Hero-Tech nahazo mpanjifa ao an-toerana sy vahiny tsy tapaka fiderana ambony noho ny chillers 'fahombiazana tsara sy ara-potoana sy feno fanompoana.Ny HERO-TECH dia nifikitra foana tamin'ny filozofia fitantanana hoe "Ataovy ny asa midina ety an-tany, Ataovy amim-pahamarinana ny olona". Amin'ny fanatanterahana ny fanoloran-tena rehetra amin'ny mpanjifa, amin'ny fanatanterahana ny antsipiriany rehetra, ny Hero-Tech dia mamaly ny tsirairay amin'ny fiheverany sy ny ahiahiny.
[Iraka orinasa]： Fanavaozana tsy tapaka, mahatonga ny indostria hahomby kokoa amin'ny angovo.
[Fanahy orinasa]: fisokafana mifototra amin'ny fahatsoram-po, kalitao ho an'ny fandrefesana, firindrana no fomba lehibe indrindra.
[Fitsipika fiasana]:miorina amin'ny fahamendrehana, kalitao aloha, mpanjifa aloha.
MIEZAHA FAHALALANA, HAZAVANA HO AVY